Haiti: Fanampiana avy any Slovakia notazonin’ny ladoany mandritra ny folo volana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Febroary 2011 7:38 GMT
Nanamafy (SLO) ny minisiteran'ny atitany fa nosakanan'ny ladoany any Haiti efa ho folo volana izao ny sambo faharoa mitondra fanampiana noho ny maha-olombelona avy any Slovakia. Na izany aza tsy ny sambon'i Slovakia ihany no voakasik'ity olana ity. Raha ny hevitr'i Vladimir Krčméry, Rektoran'i Bratislava any amin'ny anjerimanontolon'i St. Elisabeth mikasika ny Fahasalamana sy ny Asa Sosialy, ny fanaovan-gazety, kontenera anjatony maro avy amin'ny firenena hafa ihany koa no notazonin'ny ladoany Haitiana – satria “ny fanaovan-javatra maharitra herinandro any amin'ny firenen-kafa dia mila taona iray vao vita” any. Matetika ny ONG no mitaraina amin'ity fitarazohana ity, nefa i Krčméry mitaraina fa ireo afaka manao kolikoly ihany no mahavita haingana, ary ny kolikoly dia tena fahavalo ngeza be. Nisy 9 taonina amin'ny fanampiana vonjimaika, sakafo sy akanjo, mitentika 177,300 euro ny sambo faharoa misy ny fanampiana ara-olombelona ho an'i Haiti. Efa nalefa folo andro lasa izay ny sambo voalohany taorian'ny horohoron-tany tamin'ny 12 Jan. 2010. Ireto ambany ireto ny tsikera avy amin'ny mpamaky vitsivitsy ho an'ny SME.sk lahatsoratra mikasika ny tsy fahombiazan'ny fandefasana ny fanampiana mahaolombelona (mifandray amin'ny eo ambony), izay maneho hoe ahoana ny fisehoan'ny olana mikasika ny fiantraikan'ny loza any amin'ny tany lavitra any no hita any Slovakia . veteranzkoreje:
Ny fanontaniana dia hoe: iza no hahatsikaritra izany pitsony kely izany raha toa ny hafa tena manao feo manako mafy, oh, “Ny mpilalao sary mihetsika Sean Penn: Tsy nahomby tamin'ny fanampiana an'i Haiti izao tontolo izao”
Mitovy amin'ny ataon'ny ladoanintsika ny ataon'izy ireo. Te haka hetra fotsiny ny ladoany. P.S. Tena efa niainako mihitsy ny zavatra hoatr'izany teto.
Tsy rariny, fa maninona no tsy misy olona manangana fiarovana foana? … Andeha holazaina hoe didy jadona mivoatra no tena ilaina any Haiti amin'ny fotoana tahaka izao.
Andeha tsy horaharahaina izy ireo, ataovy eo ambony sambo io kontenera io ary avereno any amin'ny tompony…
zaskakovací nožík (mamaly):
nefa amin'izany, mila manome tsolotra izy ireo hamela azy ireo hamerina izany – dia voafandrika izy ireo :-))
soa ihany aho tsy nandefa na ariary aza tany, satria ny zavatra tahaka izao mihitsy no mety hitranga
Na izany aza, nandefa fanampiana ihany koa i Bretagne, ary satria ny sampan-draharahara Haisiana amin'ny varotra tsy te hamela izany hiditra ao tsy misy tsolotra, dia nijanona teo izany efa ho iray taona sahady izao – tsy haiko raha efa nalefan'izy ireo niverina any Bretagne izy ity na tsia. […] Inona no mety hiseho ao amin'ny fiarahamonina ara-dalàna aorian'ny loza? Mifanampy ny mpiray vodirindrina. Any Haiti, mifangalatra izy ireo.
Ary ahoana ny hevitrao ny amin'izay mety hiseho raha misy olona avy any amin'ny EU mandefa fanampiana ara-olombelona any Slovakia? … Mety hifarana eo amin'ny ladoany ve izany mandra-pandoan'ny olona iray ny hetra sy ny haba … Ireo jiolahin'ny ladoany ireo dia mihevitra sy manao toy izany foana.
[…] Mihevitra aho hoe eo amin'izany tranga izany, tokony hahita vahaolana ny governemanta sy ny rafitra ao aminy – tsy misy fandeferana mihtsy hamelana ireo entana ireo ho azo ampiasaina…
Eo ihany koa ny fanomezana antsika ny fanampiana amin'ny endrika fanohanana ara-bola Euro… Ary eto, ity fanampiana ity dia nangalarin'ireo izay tokony hizara izany. Tsy tsara noho ny vahoaka avy any Haiti mihitsy isika.
Efa milaza foana aho hoe: Aza mandefa zavatra fahatany any amin'izy ireo toy ny hoe lay, akanjo na kilalao ho an'ny ankizy! Vola alefa any! Tsara kokoa dolara no alefa any, betsaka amin'izany! Izay zavatra azonao ampandalovina doany amin'ny harona plastika.
Soratra miverina: Tweets that mention Haiti: Fanampiana avy any Slovakia notazonin’ny ladoany mandritra ny folo volana · Global Voices -- Topsy.com
[…] This post was mentioned on Twitter by Stratergy Director and Trail of Hope, Laura E. Smallwood. Laura E. Smallwood said: Haiti: Fanampiana avy any Slovakia notazonin'ny ladoany mandritra …: Nanamafy (SLO) ny minisiteran'ny atitany … http://bit.ly/gzZROs […]
22 Febroary 2011, 15:39